Iilogo zamaqela akhuphisanayo | Creatives Online
Ngaba unalo iqela nabahlobo bakho? Mhlawumbi umxhasi ukugunyazise ukuba wenze iilogo zamaqela akhuphisanayo kwi-eSports okanye ezifanayo? Ayisiyompambano njengoko unokucinga, kwaye yenye iprojekthi enokuza kuwe.
Ngoko ukwazi zeziphi iimpawu ezenza iilogo zamaqela akhuphisanayo, zenziwe njani kunye nezimvo kwezo logos inokuba ngumbono olungileyo kakhulu. Kwaye ke sifuna ukukunceda ube nemizekelo kwaye wazi ukuba kufuneka ujonge ntoni ukwenza omnye.
1 Iimpawu zelogos zamaqela akhuphisanayo
1.1 Zeziphi iindlela abanazo
2 Iisayithi zokwenza iilogo zamaqela akhuphisanayo
3 Imizekelo yeelogo zamaqela akhuphisanayo
3.2 Rive Gaming ngu Slavo Kiss
3.3 Cutlass Gaming nguJP Design
3.4 ThirtyBomb nguJP Design
3.5 Dragon Esports, nguJhon Ivan
Iimpawu zelogos zamaqela akhuphisanayo
Iilogo zamaqela akhuphisanayo ziziyilo zelogo ezingafaniyo nezinye, Umzamo wenziwa ukunika amandla, isibindi, amandla, njl. Injongo ayikho enye ngaphandle kokunxulumanisa iqela kunye nomzabalazo walo wempumelelo kunye naloo mfanekiso owenziweyo. Ke ngoko, ukhetho lweemilo, imifanekiso, imibala, kunye nokuchwetheza, lunento eninzi yokwenza nalo. Sixoxa ngayo ngokubhekele phaya.
Ngokubanzi, i-logo yeqela elikhuphisanayo kufuneka yenze uluvo olunamandla kakhulu, zombini njengesiseko sesazisi seqela, indlela yokuzahlula kukhuphiswano kodwa kwakhona ukudibanisa abaphulaphuli balo, amalungu eqela kunye nesibhengezo senjongo kubo bonke. .
Ezi logo zibizwa ngokuba yi-brand yeqela, kuba oko kufunwa nabo kukudala amandla ajikeleze amalungu eqela (ngokungafaniyo neelogo zenkampani, into abayifunayo kukubonakalisa uphawu).
Kuxa kuyilwa xa umzobi eqala ukudlala. Oku, njengoko besesitshilo ngaphambili, kufuneka kulungiswe kwimiba ethile enje ngondoqo weqela, into ofuna ukuyihambisa, imibala, ukuchwetheza, njl. Kuyinyani ukuba kukho iindlela ezingabizi kakhulu okanye ezisimahla (esiza kuxoxa ngazo apha ngezantsi) kodwa ezi zihlala zingabizizokuqala njengezo zinokudalwa ngumyili.
Zeziphi iindlela abanazo
Uninzi lweelogo ze-eSports okanye amaqela akhuphisanayo athande ukuba namanqaku afanayo. Enye yazo i-avatars okanye imifanekiso, ebhekisela kwimidlalo, izilwanyana okanye iimpawu zakudala, sithetha ngekrele, isithsaba, ukumkani, ikhaka ...
Ngokuphathelele "amandla" abo, kuyinyani ukuba uninzi lujolise ekuboniseni amandla kunye noburhalarhume, "uloyiko" xa bebona uphawu lwabo. Kodwa akusoloko kunje, kukho amaxesha apho inokuba thambileyo (kujoliswe kubukrelekrele kunye nokuqonda).
Los uninzi loyilo oluqhelekileyo phantse basoloko bebheja:
Izilwanyana: ingcuka, iinkawu, amangwe okanye iingonyama, okanye iimpuku. Ngamanye amaxesha imivundla, iikati, izinja, iingwenya, amacilikishe, iinyoka nazo zibandakanyiwe ...
Izidalwa zasentsomini: njengeelves, goblins, wizards, Dragons ...
Izinto zakudala: iinqaba, amakrele, izigcina-ntloko, iinqaba, iintaba, izithsaba, ookumkani, amakhaka ...
Abantu: ii-ninjas, i-shinigamis, iipirate, iiVikings, amagorha, iiknights, amajoni ...
Ubuso: bunomsindo, buvuselela, bugxeka, bubukhali ...
Izinto ezongezelelweyo: umlilo, uqhushumbo, abalawuli bomdlalo, imipu ...
Iisayithi zokwenza iilogo zamaqela akhuphisanayo
Ukuba umxhasi wakho akanazo izixhobo zokukuhlawulela nge-100% yomsebenzi wokuqala kwaye usafuna ukubanika isindululo, unokukhetha ukwenza iilogo zamaqela akhuphisanayo ngeetemplates. Kukho iisayithi ezininzi apho unokwenza khona njenge:
Yiyo iwebhusayithi apho, ulandela isifundo, unokwenza iilogo ze-eSports simahla. Ukuba nawe unekhono kunye noyilo, unokuhlala unika i-touch personal touch.
Ngoku lolona khetho lubalaseleyo olufumanayo kuba lunayo iitoni zeetemplates kunye nemizobo, kwaye unokwenza iilogo ezinopopayi. Ewe kunjalo, asizicebisi kuba ukuba ilogo iprintwe ukuthengisa ilahlekelwa lubabalo lonke.
Mhlawumbi lelinye lamaphepha agxile kakhulu kwiilogo ze-eSports. Ikhutshwe nge ngaphezulu kweetemplate ezingama-200 kwaye zinokwenziwa ngokwezifiso, ngoko iya kuba ngumsebenzi omncinci ukuyinika loo nto ikhethekileyo.
Imizekelo yeelogo zamaqela akhuphisanayo
Njengoko sisazi ukuba unokufuna inkuthazo ethile yokwenza iilogo zamaqela akhuphisanayo, nanga amanye amakhonkco kwimizekelo yolunye uyilo olwenziwe ngabayili begraphic oluya kukunika umbono wokuba ungazenza njani ngokwakho.
Sihamba kunye noyilo olutshata ngokugqibeleleyo. Kwaye, ukuba ujongisisa, uphawu lwenziwe ngamagama Agility Esports kunye nengwe kwindawo yokutsiba.
Njengoko usazi, amahlosi akhawuleza kakhulu, akakhawulezi njengezinye izilwanyana, kodwa kule meko asebenza kakuhle kuba abonisa amandla alo. Kwangaxeshanye ukuba uxelela abanye ukuba iqela alikho, uphinda ubaxelele ukuba bayakwazi ukuhlasela xa ungalindelanga.
Rive Gaming ngu Slavo Kiss
Kule meko une logo enoburhalarhume ngakumbi ukuba kuyenzeka. Nge ibhere elihlaselayo livela, likhuphe iinzipho kunye nombono obonakalayo wamazinyo. Asiyobhere epheleleyo, ekubeni idlalwa ngethunzi kwaye ayibonisi ubuncinane obuncinane ukuze wazi ukuba seso silwanyana.
Emva koko, emagameni, ukuba ujonga u-R uneempawu ezithile zokukrazulwa, kunye nezo zipho ngokucacileyo.
Imibala emdaka, ebomvu, emhlophe kunye emnyama inika ubuhle kodwa kwangaxeshanye amandla.
Cutlass Gaming nguJP Design
Ngaba asizange sithethe ngaphambili malunga nama-pirates, amakrele kunye neempawu zakudala ezifana namakhaka? Kulungile, nantsi yonke ifinyeziwe. A i-pirate enamakrele amabini kunye nasemva kwekhaka apho umzobo uvela khona kunye neeleta zeqela.
ThirtyBomb nguJP Design
Kule meko, asithethi ngomzobo omnye, kodwa ezintathu, ngokukodwa izilwanyana ezintathu ezifana nesikhova, ingcuka kunye nenyoka. Ngemibala eluhlaza, emhlophe nemthubi, i-tandem yale mifanekiso, kwelinye icala isikhova esinamehlo aso anomtsalane atyheli, kanti kwelinye yingcuka nenyoka, zisenza sibe nempembelelo.
Dragon Esports, nguJhon Ivan
Kulo mzekelo sinokubona indlela iqela Dragon Esports, kodwa uphawu wabeka «Draken». Kutheni le nto inokwenzeka? Ewe, inokuba kungenxa yokuba yimascot yeqela, yiloo nto uyibiza ngokuba yiDraken.
Uyilo lwenza inamba imida phantse lonke igama, ebonakala ngokucacileyo, ngelixa intloko yenamba ilumkisa ukuba "musa ukungcolisa naye."
Ngaba unokujonga apha.
Zininzi iinketho onokuthi uzijonge, kodwa sicinga ukuba ngezi unokwanela ukufumana indlela yokwenza iilogo zamaqela akhuphisanayo. Nangona kunjalo, ukuba unayo nayiphi na imibuzo, ungahlala usibuza kwaye siya kuzama ukukunceda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Iilogo zamaqela akhuphisanayo